ဆံပင်တွေအရမ်းကျွတ်ပြီး ပျက်စီးနေရင် ဒီ shampoo နဲ့ conditioner လေးကို စမ်းကြည့် | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဆံပင်တွေအရမ်းကျွတ်ပြီး ပျက်စီးနေရင် ဒီ shampoo နဲ့ conditioner လေးကို စမ်းကြည့်
ဆံပင်တွေအရမ်းကျွတ်ပြီး ပျက်စီးနေရင် ဒီ shampoo နဲ့ conditioner လေးကို စမ်းကြည့်
ခေါင်းလျှော်ပြီးတာနဲ့ ဆံပင်တွေအထွေးလိုက် အများကြီးကျွတ်လို့စိတ်ညစ်နေလား? ဆံပင်နှစ်ခွတွေဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်နေပြီလား? အရောင်တွေဆိုးတာများပြီးတော့ ပျက်စီးကြမ်းတမ်းနေပြီလား? မရေမတွက်နိုင်အောင် များပြားလှတဲ့ ပစ္စည်းတွေထဲမှာ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းစျေးနှုန်းအသင့်အတင့်လေးနဲ့ဟာကိုရဖို့ဆိုတာ လူ့ပြည်ကအပ်နဲ့ နတ်ပြည်ကအပ်ထိတာထက်ကိုခက်ပါတယ်နော်။ ဂျင်းတွေမမိဖို့ကလည်းအရေးကြီး😂 အဲ့တော့ မင်မင်ကရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ပစ္စည်းကောင်းလေးကိုတွေ့ထားလို့ထုံးစံအတိုင်းလက်တို့ပေးလိုက်တယ်နော်။ သူလေးကတော့ပေါ်နေတာလည်းကြာပြီးတော့ သုံးဖူးတဲ့သူတွေကလည်းနောက်တစ်ခါထပ်ဝယ်ချင်လောက်အောင်ကောင်းလို့ နာမည်အရမ်းကြီးတယ်နော်။
ကဲပြောပြလိုက်တော့မယ်နော်။ ဘာလေးလဲဆိုတာ သူလေးကတော့ ဆံကေသာအတွက်အများကြီး အရေးပါတဲ့ shampoo နဲ့ conditioner အတွဲလေးပါ။ ပြောရရင် shampoo ကကောင်းပေမယ့် ဆံပင်ပျော့ဆေးလို့ခေါ်တဲ့ conditioner မရှိရင် မကောင်းရင်စိတ်ညစ်ရပြန်ရောလေ။ ဆံပင်ပျော့ဆေးကလည်း အရေးကြီးလို့ အရည်အသွေးကောင်းတာလေးကို ရွေးသုံးဖို့လိုပါတယ်နော်။ ခုတော့ စိတ်အေးရပြီ။ The Body Shop ရဲ့ အတွဲစပ်လေးက ပျိုမေတို့ကို စိတ်ခုန်စေမှာပါနော်။
The Body Shop ကတော့ တကယ့်ကို နာမည်ကြီးတဲ့ brand တစ်ခုပါ။ ပြီးတော့ အခုဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း official ကောင်တာရှိနေပြီဆိုတော့ စိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရပြီလေ။ အဲ့ brand ကတော့ ခေါင်းစခြေဆုံး skincare ပိုင်းရော cosmetics ပိုင်းအထိပါထုတ်ထားလို့ အမျိုးအစားစုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ set လေးကိုတော့ Banana Truly Nourishing shampoo and conditioner လို့နာမည်ပေးထားပြီး သူကတော့နာမည်လေးအတိုင်း ငှက်ပျောသီးကနေထုတ်လုပ်ပေးထားတာပါ။ ငှက်ပျောသီးရဲ့အစွမ်းအာနိသင်တွေကလည်း မနည်းမနောမို့ ဒါလေးကလည်းကောင်းမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်။
ပထမဆုံး shampoo လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။
Banana Truly Nourishing Shampo
Shampoo ကတော့ အရည်နည်းနည်းကျဲပြီးတော့ငှက်ပျောသီးကို အရည်ညှစ်ထားသလိုလေးပါ။ အရောင်လေးကလည်း ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကို မရတော့ဘူး ခေါင်းလျှော်လိုက်တော့မယ်ဖြစ်သွားအောင်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အနံ့ကလည်းငှက်ပျောသီးနံ့ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ရှယ်ပဲ။ အနံကအရမ်းကိုမွှေးတဲ့အပြင် တစ်နေကုန်ကြာရှည်ခံတော့ရေမွှေးတောင်မလိုတော့ဘူး။ ဆံပင်ကျွတ်တာပျောက်တဲ့နေရာမှာတော့ဆရာကြီးပါ။
နောက်တစ်ခုက Banana Truly Nourishing Conditioner လေး
သူကတော့ ဆံပင်သားတွေကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးတဲ့ဆံပင်ပျော့ဆေးလေးပါ။ Shampoo ထက်ပိုပျစ်ပြီးတော့ size လည်း ပိုသေးပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးရဲ့ အစွမ်းကြောင့် ဆံသားတွေကို ပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေပြီးတော့ လျှော်ပြီးတာနဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေလေထဲလွင့်နေနိုင်တာပေါ့နော်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ဆံပင်ပျော့ဆေးသုံးရင် ဆံသားတွေကိုဘဲလိမ်းပေးပြီးတော့ ဉီးရေပြားကို လိမ်းစရာမလိုပါဘူးနော်။ ဆံပင်ပျော့ဆေးကို ဉီးရေပြားကို လိမ်းရင်ဆံပင်တွေကို ပိုကျွတ်စေပါတယ်။
ထုပ်ပိုးမှုလေးကလည်း ချစ်စရာလေးနော်။ တစ်ဘူးဝယ်ထားပြီးရင်လည်းသုံးပေတော့ဘဲ။ အများကြီး။ အဲ့တော့ ဘာလိုသေးလဲ? ပြီးတော့သူလေးကတစ်ခါသုံးပြီးတာနဲ့ ဆံပင်ကျွတ်တာကို အံ့သြလောက်အောင်သက်သာသွားစေနိုင်တယ်လို့နာမည်ကြီးပါတယ်။ အဓိကကတော့အနံ့ပါ။ တကယ့်ကိုမွှေးကြိုင်ပြီးတော့ ငှက်ပျောသီးကိုအရည်ညှစ်ပြီး ခေါင်းပေါ်တင်ထားရတယ်ထင်ရအောင်ကိုမို့လို့ အနံ့မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ မဝယ်နဲ့နော်။ ပြီးရင် မသုံးဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
ဆံသားဖွာခြင်း, ပျက်စီးနေတဲ့ဆံသားတွေ, ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်တာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတာနဲ့နက်မှောင်သန်စွမ်းတဲ့ဆံသားလေးကို ရရှိမှာ မလွဲမသွေပါဘဲနော်။ ပေးရတဲ့စျေးနဲ့လုံးဝကိုက်ညီတဲ့ တန်ဖိုးကိုရမှာဆိုတော့ စျေးကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးသိချင်မှာပေါ့နော်။
ပြောပြပေးပါတော့မယ် shampoo 400ml လေးရဲ့ စျေးနှုန်းက မြန်မာငွေ 17000 ကျပ်ဖြစ်ပြီးတော့ conditioner 250ml လေးကတော့ မြန်မာငွေ 13000 ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူနိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ Junction City, Level2က The Body Shop Counter မှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းနီအမြဲဆိုးတာက ကောင်းတာလား? မကောင်းတာလား?
Tags: Conditionerခေါင်းလျှော်ရည် / Shampoo